Abril 2020 - Child Care Aware WA
Bil: Abriil 2020
Xannaanada Ilmaha COVID-19 Isgaarsiinta, Jawaabta iyo Xarunta Tixraaca
The Child Care Aware ee Washington Xarunta Qoyska waxay ballaarisay howlaheeda si loogu adeego sida jawaabta daryeelka carruurta ee gobolka oo dhan, ilaha iyo xarunta gudbinta inta lagu jiro cudurka faafa ee COVID-19. Qoyska
Xarunta, oo ay maamusho Child Care Resources , waxay taageeri doontaa qoysaska raadinaya xanaano caruur, bixiyayaasha xanaanada cunugga ee u baahan macluumaad cusub COVID-19 macluumaad iyo taageerooyin badbaado, iyo sidoo kale loo shaqeeyayaasha u baahan xanaano caruur.
ikhtiyaar u ah shaqadooda. Xarunteena wicitaan ee la ballaariyey waxay u adeegi kartaa dadka soo waca isla markiiba isla markaana ku hadla afkooda hooyo.
Xaruntu waxay wicaysaa wicitaanada Isniinta - Jimcaha, 8:30 aroor - 4:30 galabnimo waana shaqaale ay leeyihiin wakiilo adeega reerka khibradeysan iyo tababbarayaasha waxbarashada hore.
Faahfaahin dheeraad ah oo Ingiriis ah, dhagsii halkan.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee Español, dhagsii halkan.
Faahfaahin dheeraad ah oo af-soomaali ah, guji halkan.
Inta badan waxay ku guuleysteen Xannaanada Ilmaha Xannaanada laga bilaabo 2020 Kulan Casumaadda CVEID-19-Vetoes Gomes
Child Care Aware ee Washington Waxay ku amaaneysaa gudoomiye Inslee iyo hogaankiisa wasaarada caruurta, dhalinyarada, iyo qoysaska (DCYF), inaynan ruqsad kaheleyn qaansheegadka daryeelka caruurta ama miisaaniyada maalgashiga. sameeyey inta lagu gudajiray Kalfadhiga Sharci dejinta ee 2020. Sida uu Guddoomiyuhu sheegay, “shaqaalaha daryeelka carruurta ayaa ah nidaam taageero oo muhiim ah halgankaan… waxay u shaqeeyaan inay halis weyn ugu jiraan caafimaadkooda…”. Barayaasha daryeelka caruurtu waxay naftooda gelinayaan halis weyn si ay u daryeelaan carruurta shaqaalaha muhiimka ah, kuwaas oo inbadan oo ka mid ah ay ku dhici doonto COVID-19. Waxay albaabada u furayaan qoysaska in kasta oo dhammaantood aynan helin daryeel caafimaad, waxay la ildaran yihiin mushaharka saboolnimada, oo aan marin u helin sahayno ama baaritaan. Hubinta in maalgashiyadii ugu dambeeyay, sida kordhinta heerarka daryeelka, fidinta waqtiga qoysaska leh carruurta yar yar ee la soo deristay hoy la’aan ay heli karaan daryeel bilaash ah, iyo bixinta wadooyin badan oo barayaasha sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen heerarka gobolka, waxay gacan ka geysan doontaa in la hubiyo in aaney kaliya ilmaha noqon doonin. Daryeel u yeelo maanta shaqaalaheena muhiimka ah, laakiin qof walbaa wuu joogi doonaa markii aan shaqada dib ugu laabano!
Waxaan uga mahadcelineynaa Guddoomiyaha Gobolka iyo DCYF tallaabada ugu horeysa ee muhiimka ah, oo waxaan ugu yeernaa dhammaan kuwa dejiyayaasha inay waxbadan qabtaan. Illaa iyo hadda in ka badan 1,000 barnaamijyo ah oo daryeelka carruurta ah ayaa loo xiray daacuunka dartiis, taas oo yareynaysa guud ahaan awoodda daryeelka carruurta ee ku dhawaad 30%. Inta badan barnaamijyada daryeelka carruurta ee guud ahaan dalka ayaa sheegaya in ganacsigooda uusan ka badbaadi doonin xiritaan illaa Washington ay la kulanto. Nidaamiyaasha siyaasada dhamaan heerarka dowlada waa iney sameyaan wixii karaankooda ah hada si loo hubiyo in hoos u dhac weyn ku yimaado daryeelka caruurta kama hor istaageyso dowladdeena iyo dalkeena in ay gartaan soo kabashada dhaqaalaha marka waqtigu yimaado.